विद्येयकमा केसीले उठाएका प्रायः माग समावेश छन्, संसदलाई कमजोर पार्ने काम गर्नुहुँदैन् :: डा. दिक्षित – Esancharpati
काठमाडौं, १८ माघ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् पूर्वमन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले अनशनरत डा. गोविन्द केसीले तत्काल अनशन तोड्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘सरकार केसीसँग वार्ता गर्न तयार छ । तर, उहाँले अनशन तोड्नुपर्छ ।’
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले डाक्टर केसीको स्वास्थ्यप्रति वर्तमान सरकार संवेदनशील रहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सरकारले गोविन्द केसीलाई मार्न चाहेको छ भनेर कसैलेपनि दुष्प्रचार नगरौं । यस्तो किसिमको भ्रम र अफवाह नफैलाउँ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै पाण्डेले सरकार केसीसँग सम्वाद गर्न तयार रहेको सुनाए । उनले भने,‘सरकारले वार्ता टोली बनाउने वा नबनाउने वा एक्लै गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हो ।’ पाण्डेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ‘नन–ईस्यु’ मा संसद अवरोध गरेर रडाको मच्चाएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘एक जना डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा लागेर व्यवस्था नै खराब हो जस्तो गरिरहेको छ ।’
कांग्रेससँग डाक्टर केसीबाहेक अरु कुनै एजेण्डा नभएको पनि आरोप लगाए । पाण्डेले भने,‘चिकित्सा शिक्षा विद्येयक केसीले उठाएको मागभन्दा माथि उठेर आएको छ । गोविन्द केसीको दिमागमा नभएको कुरा पनि विद्येयकमा आएका छन् ।’
उनले ऐनमै मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भनेर लेखिएको दुनियाँमै पहिलोपटक नेपालमात्रै होला भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘दुनियाँमै यस्तो बाध्यकारी प्रावधान कुनैपनि ऐनमा लेखिएको छैन होला । तर, नेपालमा लेखियो ।’
पाण्डेले कुनैपनि हालतमा विद्येयकको प्रस्तावनामा माथेमा आयोगको नाम नलेखिने जिकिर गरे । उनले भने,‘हिजो राजा, महाराजाको नाम लेखिन्थ्यो । तर, अब त्यस्तो हुँदैन् ।’ कांग्रेसले पनि अहिले आएर ठूलो र चर्को कुरा गर्न नहुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘कांग्रेसले ठूलो कुरा गर्न पाउँदैन् । हिजो कांग्रेस सरकारमा हुँदा गोविन्द केसी ७ पटकसम्म अनशन बसे । तर, खोई त कांग्रेसले विद्येयक ल्याउन सकेको ?’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘डाक्टर केसी जनताको माग लिएर अडिग भएर लड्नुभएको छ । उहाँको जीवन रक्षा हुनुपर्छ । तर, सरकारले यसमा कुनै चासो राखेको छैन् । बेवास्ता गर्यो ।’
नेता पौडेलले वर्तमान सरकारले लोकतन्त्र सुहाउँदो व्यवहार नगरेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारले डाक्टर केसीसँग गरेको सम्झौताको मूल विषय तोडमोड गरेर विद्येयक ल्याएको छ ।’
पौडेलले डाक्टर केसीलाई अनशन बसाउन लगाउने कांग्रेस नै हो र अब यसको अवतरणपनि कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भनेको कुराको खण्डन गरे । उनले भने,‘सरकार हिजो सरकारमा हुँदा डा. केसी ७ पटक अनशन बस्नुभएको छ । उहाँलाई कसरी कांग्रेसले अनशन बस्न लगायो ? यो गलत आरोप हो ।’
नेपाल चिकित्सक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेलले सरकारले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘डाक्टर केसीको अनशन तोडाउन सरकारले उहाँलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । उहाँको जीवनरक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।’
सरकार र केसी पक्ष दुवै वार्ताको लागि उदार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘अब पूर्वाग्रह, तुष, अहंकार र हठबाजी गर्नुहुँदैन् । दुवै पक्ष वार्ताको लागि लिवरल हुनुपर्छ । यतिबेला डा. केसीकै सत्याग्रहका कारण प्राप्त उपलब्धिको वकालतमा भन्दा सत्याग्रहीको ज्यान बचाउन सक्रिय हुनुपर्छ । ज्यान बचाउने उपाय खोज्नुपर्छ ।’
उनले डाक्टर केसीले उठाएका धेरै कुराहरु विद्येयकमा समावेश भएको पनि स्पष्ट पारे । उनले विगतमा आफूहरुले नै चिकित्सा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर आवाज उठाएको सुनाए ।
नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले डा. गोविन्द केसी र नेपाल मेडिकल एशोसिएशनले जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘एशोसियएनले वार्ताको लागि पहल गर्नुपर्छ । तपाईहरुको कुरा सरकारले सुन्छ। अस्पताल बन्द गरेर जनतालाई सास्ती दिने काम गर्नुहुँदैन् ।’
उनले डा. केसीले संसदीय सर्वोच्चतालाई बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘ओलीलाई कमजोर गर्ने कुरा गर्नुहोस, यसमा कुनै आपत्ति छैन । तर, संसदलाई कमजोर पार्ने कुरा नगर्नुहोस् ।’
उनले संसदबाट पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विद्येयकमा केसीले उठाएका प्रायः सबै माग समावेश भएको पनि दाबी गरे । तर, केसीले राजनीतिक मुद्दा उठाएकोमा उनले दुःख पोखे ।
उनले अस्पताल बन्द गरेर के गर्न खोजेको हो ? भन्दै नेपाल चिकित्सक संघलाई प्रश्न पनि तेर्साए ।
किन गरे राजेन्द्रले हिरोइन रक्षा रोमान्स ?